6 Ebumnuche ziri ezi ịzụta B2B ma ọ bụ B2C Atụmatụ Atụmatụ | Martech Zone
6 Ebumnuche ziri ezi ịzụta B2B ma ọ bụ B2C Atụmatụ Atụmatụ
Nwere ike ịnụ mkpu a? Chaị.. Jenn Lisak mere mgbe ọ biputere na Twitter maka ebe zụta ezigbo azụmahịa. Mkpesa iwe ahụ bịara ozugbo ma ọ bụ otu onye ka akpọrọ ụlọ ọrụ anyị enweghị isi. Ndị tweets ahụ bụ ihe ọchị nke na Jenn wepụrụ Tweet ahụ ma kwụsị mkparịta ụka ahụ.
Mgbe Jenn gwara m ihe o mere, iwe were m nke ukwuu. Nke mbu, asusu nke mmadu n'elu ikpo okwu nke na ere ahia na na-ere data ya n'ihu ọha bụkwaruphu ọriri. Nke abuo, mmeghachi omume Jenn ozugbo ahụ enweghị nghọta. N'agbanyeghị amara Jenn, ịdị umeala n'obi na nka… ndị soro ya ozugbo chere na ndepụta ndị a ga-eji maka ihe ọjọọ.
Nkwenye ahụ bụ na ndepụta ndị a ga - adị SPAM nke mmadụ. Ee… a seasoned marketer na gị n'ụlọnga na specializes na email nkwukọrịta, mmekọ na ihe email ahịa ikpo okwu, ma nwee mmekọrịta dị mkpa na a mgbapụta mgbapụta… Ga-eche n'ụzọ ụfọdụ na ọ bụ nnukwu echiche ịmalite azụmaahịa adịgboroja.
Mgbe m nọ na ụlọ ọrụ na-ezipụ akwụkwọ ozi, anyị zụtara ndepụta anaghị akwụsị akwụsị. Heck, otu n'ime atụmatụ dị ịtụnanya nke mkpọsa President Obama mere bụ ịzụta ọtụtụ nde ihe ndekọ nke ozi nkeonwe iji zụlite mmemme mmemme nke obodo ebe ha nwere uche… na-eduga ya iti Hillary Clinton (onye nwere nchekwa data Democratic) na snag na-eduga na ntuli aka.
Zụta data kwesịrị ịbụ ego maka azụmahịa ọ bụla! Iji SPAM? Dị nnọọ iche!
Iji data azụmahịa na-enyere ndị ahịa aka ime mkpọsa mgbasa ozi ezubere iche nke na-enyere ha aka izere SPAM kpamkpam!
Ntinye data na ẹdude ahịa anatara nwere ike inyere-enye gị ruo ụbọchị azụmahịa ozi, nkewa data, ozi kọntaktị, na ndị ọzọ na isi ozi. Ozi ahụ nwere ike inyere gị aka ịzụlite mgbasa ozi ezubere iche nke ọma na ịkọwapụta ziri ezi.
Nhicha data nwere ike igbochi gị na listi oji, bulie igbe mbata igbe gị, nyere gị aka izere nzacha junk, ma meziwanye nnweta zuru ezu. Data na-akawanye nká - ọkachasị adreesị email azụmahịa ebe ntụgharị dị elu. Zụta emelitere anatara ma ọ bụ ọcha gị ugbu a anatara nwere ike ịmegharị nnukwu ndozi na mmeghe, pịa-site na ọnụego, na ntụgharị na ịre ahịa email gị.
Chọta Ndi ana-akpo nke gara n'ihu nwere ike inye aka gbasaa azụmahịa gị. Ọ bụrụ na mụ na otu kọntaktị rụkọrọ ọrụ wee nwee ihe ịga nke ọma, ịchọta ebe ọ kwagara ma weghachite ngwaahịa na ọrụ gị nwere ike inye aka weghachite ha! Ọ bụ ezie na njigide bụ amụma kachasị mma, ndị ahịa na-agagharị agagharị na-agagharị na-arụ ọrụ dịkwa irè!
Nyocha analysis - nyocha ndị ahịa na nchịkọta data dị mma, mana mgbakwunye data nwere ike inye gị ozi niile azụmaahịa gị chọrọ iji nyere aka ịghọta ndị ahụ ma ọ bụ azụmaahịa ndị ị na-azụrịrị. Ndi mmadu na ndi mmadu nwere ike inyere gi aka ighota ulo oru na ala nke ị na-eru (ma obu na o bughi), nyere gi aka imeputa atumatu ọdịnaya ezubere iche, ma nyere gi aka ikpebi uzo mgbasa ozi kachasi nma iji nweta ozi ziri ezi nye onye ziri ezi.
Azụmaahịa Ọhụụ - ị ghọtara ahịa ahịa gị? Enwere ulo oru ohuru di n’ebe ahu ma obu olile anya ohuru n’ebe ahu igha agha ahia? Ndepụta azụmaahịa ọhụrụ bụ ebe a na-egwu ọla edo n'ọtụtụ ụlọ ọrụ! Ọ bụghị maka SPAMMING, mana maka ịchọta na iwulite mmekọrịta na ha. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-enye akara ngosi na ọrụ imepụta, ndị ka mma ịzụ ahịa karịa ndepụta azụmaahịa ndị etinyere ma nata ikikere azụmaahịa ha. Kedu ihe ọzọ ị ga - achọta ha na - enweghị data ahụ?
Ndepụta Atụmatụ - ị bụ azụmaahịa natara ọnye ego itinye ego? Oge eruola ka ịmalite ịmalite ịchọta atụmanya na irere ha. Gaghị ekwe omume na-eche na ikike dabeere inbound ahịa mgbalị iji jide ma na ndị mmadụ na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị… ị ga-atụfu ndị investors na gị ohere. Ndepụta atụmatụ nwere ike inyere ndị otu ahịa gị aka ịkwado oku ha na-eme ma ziga ngalaba ahịa gị nwere ike imetụ aka. Enweghị ụzọ isi mezuo nke a na-enweghị ịzụta data.
You azụtala data ezubere maka azụmahịa gị? Arụrụ m ọrụ maka ọtụtụ azụmaahịa, rụọ ọrụ na nchekwa data na azụmaahịa ziri ezi, ma ugbu a n'ịntanetị. Anyị ghọtara nke ọma na ikike ikike inbound na-agbachitere nsonaazụ azụmaahịa maka azụmaahịa. Ma anyị abụghị ndị na-amaghị na eziokwu ahụ zụrụ data nwekwara ike inyere aka inyocha, nyochaa, melite ma nwaa ọma ahịa na ahịa mgbalị. Enwere ezigbo nloghachi na data azụrụ!
Kwadoro site na onye nkwado anyị, Agbanyela.
Tags: zụta datazụta ndepụtadata mgbakwunyenhicha datandepụta emailfirmographicsazụmaahịa ọhụrụnyocha profaịlụndepụta ndeputa
Mbido mbụ mgbe ị na-ejikọ ndị ahịa
Real-Oge Mobile Mgbasa ozi esighi na site Zapp360
Ngwọta doro anya
Feb 13, 2015 na 12:07 PM
Oké isiokwu Douglas, M na-achọ ozi gbasara B2B ma ọ bụ B2C na-atụ anya ndepụta ruo ogologo oge ugbu a, nke a enyerela aka na-ekele m, M ga-eso ndị otu m kerịta nke a.
Mee 16, 2016 na 3: 45 PM
Hụrụ post a Douglas n'anya!
Listszụta ndetu email na-enweta ụdị RAP ahụ dị njọ mana ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya ka mbọ ị na-agba ahịa na-enweta traction. Mụ onwe m na-arụrụ ụlọ ọrụ akpọrọ Clickback nke na - arụ ọrụ kpọmkwem na ụlọ ọrụ B2B na mbọ ahịa ọpụpụ ha.
O doro anya na otu isiokwu m ga-ekerịta!
Mee 16, 2016 na 10: 05 PM